Michael Owen Oo Saadaaliyay Halka Ay Arsenal Ku Dhameysan Doonto Xilli Ciyaareedkan
Home Horyaalka Ingiriiska Michael Owen oo saadaaliyay halka ay Arsenal ku dhameysan doonto xilli ciyaareedkan
Michael Owen ayaa biyo qabow ku shubay hadal heynta ah in Arsenal ay ku dhameysaneyso afarta kaalmood ee sarre ee Premier League xilli ciyaareedkan.
Gunners ayaa ku dhameysatay kaalinta lixaad ee kala sarreynta Premier League xilli ciyaareedkii hore si ay u lumiso booska Champions League taasoo ugu dambeyntii noqotay xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay ee Arsene Wenger.
Arsenal ayaa u jeesatay tababarihii hore ee Paris Saint-Germain iyo Sevilla Unai Emery si ay ugu badalaan tababarahooda halyeeyga ah ee The Emirates ka hor xilli ciyaareedka cusub ee Premier League.
Kooxda waqooyiga London ka dhisan ayaa la soo wareegtay shan ciyaaryahan oo cusub xagaaga iyagoo isku dayaya inay dib u habeyn ku sameeyaan kooxda Arsenal si ay ugu soo baxaan afarta sare.
Arsenal ayaa guuldarro 2-0 ka soo gaartay kooxda difaacaneysa Premier League ee Manchester City kulankoodii furitaanka xilli ciyaareedkooda ee Emirates ka hor inta aysan guuldarro 3-2 ah ka soo gaarin Chelsea FC kulankii ka dhacay Stamford Bridge horaantii bishaan.
Previous articleMan United oo tartan kala kulmeysa Juventus oo ku aadan da’yarka Isak Bergmann Johannesson
Next articleBruno Fernandes oo digniin u diray xiddigaha Man United kadib guushii West Brom